Massive Warfare: Aftermath 1.26.64 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.26.64 လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
ဒါကကြီးမားတဲ့စကေးမှာစစ်ပါ! အကြီးအကျယ်စစ်ဆင်ရေး: နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေသင်သည်ထပ်တူပြုခြင်းအွန်လိုင်း PvP တိုက်ပွဲများအတွင်းင့်ကားများ, သင်္ဘောများနှင့်ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်ကမ္ဘာကဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်မည့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်သာ multiplayer စစ်ပွဲဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲများမြေပြင်, ပင်လယ်နှင့်လေထုကိုဖြတ်ပြီးရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ သင်တစ်ဦးတတိယပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကိုအတွက်စစ်မြေပြင်၏စိတ်လှုပ်ရှားနေကြလိမ့်မည်။
ဒါကအားလုံးမော်တော်ယာဉ်တိုက်ပွဲများ vs. မော်တော်ယာဉ်အကြောင်းပါ။ တစ်ဦးတင့်ကား, စစ်သင်္ဘောသို့မဟုတ်ရဟတ်ယာဉ်ကို ယူ. သင်၏ရန်သူသည်စစ်တိုက်ခြင်း။ သင့်ရဲ့စစ်စက် Upgrade ။ မြင့်မားသော res 3D ၌ဤ Simulator ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်တန်ဖိုးထားတယ်။ သင့်ရဲ့ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ blitz ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာသံလက်နက်နှင့်သင်၏အကြံပေးအဖွဲ့ဖောက်လုပ်။ သင့်ရဲ့ရှပ်ပြေးယာဉ်ပိုကောင်းအောင်နှင့်ဖျက်သင်္ဘောသို့လှည့်။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်လျှော့မတွက်မထားပါနဲ့။ ဒါကသေစေနိုင်သောတိုက်ခိုက်ရေးဖြစ်ပြီးအမှားတွေကိုသေတတ်သောဖြစ်ကြသည်။ Watch-ထဲကစစ်မြေပြင်ဝေဖန်ထိုးနှက်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လက်ျာပြောက်ကျားနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါသွားပါသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျဒီဂိမ်းထဲမှာတစ်ခု Ace ဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုရင်အနိုင်ရတဲ့တိုးတက်မှုမှသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာအမြောက်တပ်လယ်ပြင်၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မည်။ သေနတ်ပစ်ထွက်ရှိပြင်းထန်သောပါ! စစ်မြေပြင်အတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာအရေးယူခံစားရတယ်။ အဆုံးစွန်သေနတ်သမားရှာဖွေနေပါသလား ဤကဲ့သို့သောအဘယ်သူမျှမ action ကိုဖျော်ဖြေရေးရှိပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုကိုနားထောငျ? အနိုင်ရသင့်ရဲ့တာဝန်ပါ!
သငျသညျ MMO နှင့်အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းအရေးယူဂိမ်းများကိုဆော့ကစားလိုနှင့်သင် upgrade လုပ်လို့ရပါပြီစစ်စက်တွေနဲ့ Arena သေနတ်သမားဂိမ်းစိတ်ကူးလျှင်ဤသည်သင်၏ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Battle ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကာစစ်တပ်စုဆောင်း။ သင့်ရဲ့အမှုထမ်းကူညီပါကာစည်းကမ်းကို Legion of Honour သို့အသွင်ပြောင်း။ အဆုံးစွန်အင်အားစုဖြစ်လာသည်။ ဤသည်ကြီးမားသော Warfare ပါ!
•င့်ကားများ, ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်ရှပ်ပြေးယာဉ်အပါအဝင် 20 စစ်ယာဉ်များ
သင့်ရဲ့ယာဉ်များစိတ်ကြိုက်• 15 ပုံစံများနှင့် decals
• 28 နည်းပညာကို power-ups ကနေရှေးခယျြခဲ့ဖို့
•2Modes သာ: အားလုံးနှင့်အဖွဲ့ Deathmatch များအတွက်အခမဲ့
•မဟာဗျူဟာ 4v4 အွန်လိုင်း multiplayer
•သစ်ကိုတင့်ကား Unlock နှင့်သင် upgrade ချင်သောအရာကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျော်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်
•သင် decals နှင့်ပုံစံများနှင့်အတူအကြံပေးအဖွဲ့စိတ်ကြိုက်အတူနေသောသင်၏ရန်သူသည်ပြရန်
•အခမဲ့-မှ-Win: လူတိုင်းအတွက် In-ဂိမ်း element တွေကိုညီမျှ access ကို
•နက်ရှိုင်းသောတိုးတက်မှုစနစ်က: င့်ကားများ၏5လွှာသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်လေ့လာစူးစမ်းဖို့
•အဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဂရပ်ဖစ်တိုးမြှင့်; အမျိုးမျိုးသော device များအတွက် optimization
•2ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာ: ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်မှုအဘို့အလိုအလျှောက်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆုံလည် / ကင်မရာကို manual လှုပ်ရှားမှု
•ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ကစားသမားအထိမ်းအမှတ်တွေကိုနှင့်အတူဂလိုဘယ် PvP အဆင့်
• In-ဂိမ်း chat နဲ့ Clan ရဲ့ချက်တင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို
ကစားသမားအွန်လိုင်းကစားရန်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ပြု• Clan ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပါပဲ! https://www.facebook.com/massivewarfaregame/
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ! https://twitter.com/massivewarfare_
d0ss စတိုး 32.61k 6.61M
APK ဗားရွင္း 1.26.64